အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအနီး အီရန်ဒုံးကျည် ကျရောက် | Peoples Age News
Home နိုင်ငံတကာ အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအနီး အီရန်ဒုံးကျည် ကျရောက်
အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအနီး အီရန်ဒုံးကျည် ကျရောက်
Posted By: Peoples Ageon: December 31, 2015 In: နိုင်ငံတကာ
By : ပြည်သူ့ခေတ် ၊ဒီဇင်ဘာ ၃၁
အီရန်နိုင်ငံက စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်လိုက်သည့် ဒုံးကျည်တစ်စင်းမှာ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစင်းအနီး ကိုက် ၁၅၀၀ အကွာအဝေးနီးပါသို့ ကျရောက်ခဲ့သည်ဟု အမေရိကန် ပင်တဂွန် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက CNNသတင်းဌာနသို့ ပြောကြားချသည်။
အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Harry S. Trumanသည် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏ ၀င်ပေါက်ဟုသတ်မှတ်ထားသည့် ယင်းဒေသသို့ ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့က ဖြတ်သန်းနေစဉ်တွင် အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ လက်တွေ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပစ်ခတ်မှုမှ ဒုံးကျည်တစ်စင်း၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန် စစ်ဘက်ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူ Cmdr. Kyle Raines က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်း၏ ကနဦးသတင်းကို NBC သတင်းဌာနမှ ဦးစွာ တင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားသို့ အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Harry S. Truman ဖြတ်သန်းနေစဉ်တွင် ယင်းဒေသတွင် ၎င်း လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအပြင် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို အစောင့်လိုက်ပေးနေသည့် အမေရိကန် USS Buckley ဖျက်သင်္ဘော၊ ပြင်သစ် ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်တစ်စင်းလည်း ရှိနေခဲ့သည်။
Cmdr. Kyle Raines က အီရန်၏ ယခုလုပ်ရပ်သည် အလွန်အမင်းရန်စသည့်လုပ်ရပ် ဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ Ref : CNN
လိပ်ကျွန်းအမှုအတွက် သေဒဏ်ကျခံရသော မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦး မိခင်တို့ကို ဦးဇော်ဇော်က သိန်းငါးဆယ်စီလှု
လူမြင်ကွင်းတွင် နို့တိုက်မိသည့်အတွက် ကလေးမိခင်တစ်ဦးကို ISအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါများ ဖြတ်တောက် သတ်ဖြတ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့တွင် နယ်ခြားစောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ တင်ဆောင်လာသော လေယာဉ်ပျက်ကျ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦး သေဆုံး